100 casharro fiidiyow oo aad u xiiso badan oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha (II) | Abuurista khadka tooska ah
Jimicsigu waa tilmaam aasaasi ah oo lagu awoodo xoojinno awoodeena oo balaadhinta jahooyinkayaga. Sida heer kasta oo xirfadle ah, heer sare waxaa weheliya maalgelin waqti, dadaal iyo dabcan xamaasad iyo xamaasad.
Laga soo bilaabo Creativos Online waxaan kugu martiqaadeynaa inaad jimicsi sameysid badanaa, maalin kasta haddii ay suurta gal tahay, iyo inaad waxyaabaha aad ka walwasho sii noolaato. Xusuusnow in aad adigu xadayn karto adiga oo keliya adiguna waad go'aansan kartaa inta aad u socoto. Halkan waxaa ah toban casharro kale oo aasaasi ah, xiiso leh oo hal abuur leh. Ku raaxeyso asxaabtooda! Xusuusnowna inaad maalin walba nala tababari karto adiga oo iska diiwaangelinaya kanaalkayaga ka soo xiriir khadkan hoose.
Ma rabtay inaad midabka timaha ka bedesho sawir? Casharradan fiidiyowga ah waxaad ku arki doontaa sida ay u fududaan karto iyo natiijooyinka wanaagsan ee aan heli karno. Waxaan ka sameyn doonnaa barnaamijka 'Adobe Photoshop' waxaanan diiradda saari doonnaa gaar ahaan adeegsiga aaladda "Wax ka beddelka habka maaskaro deg deg ah" iyo waji-hagaajinta.
Fiidiyowgaan waxaan ku arki doonnaa nidaam aad u fudud oo loogu beddelayo sawir gacmeedkeenna sawirrada dhijitaalka ah iyadoo loo marayo dalabka Adobe Photoshop iyo farsamada Farshaxanka khadka. Nidaamku waa mid aad u fudud, in kastoo haa, aad u hawl badan, gaar ahaan haddii uu yahay sawirro isku dhafan oo qaddarro badan oo faahfaahsan iyo nuances ah.
Fasalka wuxuu diiradda saarayaa habka loo si wax ku ool ah u dhexgal tattooskeena maqaarka shaqsiyadeena. Waxaan ku xushay sawirkan midab madow iyo caddaan ah, laakiin qaabsocodku waa isku mid haddii aan ku shaqeyno sawir midab leh.
Weligaa ma isweydiisay sida loo abuuro saameynta habeenkii ee Photoshop? Hadday sidaas tahay, ha moogaanin casharradan fiidiyowga ah. taas oo aad sidoo kale ku baran doontid habab kala duwan oo loo mariyo ceeryaanta iyo roobka. Waxaan rajaynayaa inaad u aragto inay waxtar leedahay haddii aad wax shaki ah, su'aalo ama talo ah ka qabtid, ha ka waaban inaad nooga tagto faallo.
Shutter Wax ku ool ah waa a Saamaynta 3d inaad xaqiiqdii aragtay wax kabadan hal jeer. Waa saameyn aad u qurux badan oo muuqaal ahaan u muuqan kara halabuur, mustaqbal iyo halabuur maskaxeed. Waxaan ku heli karnaa midkood annaga oo ku codsanna barnaamijkayaga 'Photoshop' ama si toos ah kamaraddeenna. Si aan gacanta ugu qabanno, waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa inaan qabanno seddex miiraa midab. Miiraha cas, shaandhada kale ee buluuga ah, iyo shaandhada kale ee cagaaran Waxaan dhigi doonaa miirayaasha dhamaadka muraayadayada waxaan awoodi doonnaa inaan ku toogno xorriyad buuxda.
Waxaan kaga shaqeyn doonnaa qaab aad u fudud oo loo marayo adeegsiga Photoshop si gaar ah, in kasta oo la adeegsanayo qalabyada 'Topaz Labs plugins' ee aad bilaash uga iibsan karto degelkeeda rasmiga ah (nooca tijaabada ee 30-ka maalmood ah).
Cashar fiidiyow oo aad u fudud oo lagu barto sida wax loo abuuro waraaqaha dareeraha ah oo leh barnaamijka Adobe Photoshop. Fiidiyowgan ugu horreeya waxaan arki doonnaa oo keliya sida loo dalbado a qoraalka qoraalka.
Saamaynta midab kala bixid Waxay noqon kartaa mid waxtar badan, waxay noo damaanad qaadaysaa muujinta weyn waana hab ku habboon oo lagu soo jiito dareenka dhagaystayaasheena. Habka ay u maleyneyso midowga bilicsanaanta ee u dhexeeya waagii hore iyo hadda maxaa yeelay shaqadeeda ugu weyni waa in la abuuro isku xirnaan farshaxan oo ka kooban halabuurka ugu cawsan ee leh waxyaabo aad u midabo badan.
Fiidiyowga waxaan ku arki doonnaa hab aad u fudud oo lagu abuuri karo milicsiga biyaha iyadoo la adeegsanayo barnaamijka Adobe Photoshop (oo ay ku jiraan mowjadda saameynta) oo si buuxda wax looga beddeli karo abuurista walxo caqli badan.
Fiidiyowga soo socda waxaan ku baran doonaa abuurista milicsiga dusha sare qaab aad u fudud oo macquul ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 100 casharro fiidiyow oo aad u xiiso badan oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha (II)
aad u wanaagsan, waan ku dhaqmi doonaa !!! mahadsanid wadaagida
Waad ku mahadsan tahay wanaagga aad wadaagaan oo dhan.
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga iyo inaad na raacday! :)
Waxaan kaliya arkaa 10 casharro
Ku jawaab caillu